Uchungechunge uxhumano - kuba kwakwakhe lapho amalunga axhunyiwe kuphela komunye umkhawulo. Ukulandelana ungachazwa ukuthi akubandakanyi noma yiphi amagatsha.
Uxhumano uchungechunge parallel ungachazwa ukuthi senziwa uxhumano parallel, okufanele ISIZINDA okungenani ezimbili.
Resistors - lawa izakhi ukumelana yokufakelwa. Zisetshenziswa electronics njengenhlangano umthwalo owengeziwe ukunciphisa voltage noma wesifunda yamanje. Indlela lokhu kwenziwa?
Uma kudingekile ukunciphisa yamanje, senziwa uchungechunge uxhumano resistors. Kulokhu, ukumelana samanje ngamunye okufanayo futhi umehluko ezingaba lihlukile. Kufanele kuqashelwe ukuthi engaba umehluko - okungukuthi, ubukhulu bale iconsi voltage, incike ukumelana we Resistor.
Ngokwesibonelo, ngesimiso somshini nge voltage ka 220 V kuyinto ikhoyili ukumelana 1 Ohm. Uma omunye emikhawulweni yaso yomibili ukuhambisa isigaba, kanti eyesibili - zero, eqinisweni kuzoba short circuit, ngakho njengoba 1 Ohm - kungcono kancane kakhulu. Kuzobakhona zamanje omkhulu, ikhoyili uyozishisa futhi wabhula inethiwekhi. Nxa ikhoyili ochungechungeni ukubeka amabili resistors ka ohms 500, le-short circuit akuyona, kanye lekhoyili izosebenza njengoba kufanele.
Mayelana parallel ngayinye imisinga legatsha iyokwehluka, kodwa voltage kuyoba okufanayo. Ngakho, ukubaluleka samanje ingxenye ngayinye sincike ukumelana kwale ngxenye. Leli cebo isetshenziswa ukwandisa yokwehla kwamandla. Ngokwesibonelo, ukumelana ikhoyili yakhelwe 50 B. Ukunika amandla kule nethiwekhi kuya 220, kufanele kube parallel ukuletha ukumelana ezifanele. On kuzodala ukwehla kwamandla, kanye lekhoyili ngeke ushise.
Ngakho, uxhumano kuqondane and serial asetshenziswa ezimweni ezikhethekile nokusebenzisa ngokomthetho Ohm sika.
Uma kwenziwe uchungechunge uxhumano we LED, kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma kwenzeka ukwehluleka okungenani omunye wabo izovala lonke uchungechunge. Njengoba sekushiwo, kwelamanje esikhundleni zokugwema ukuphuka amacala ukugeleza wamiswa circuit siphukile. Uma ixhunywe parallel, akunandaba okuyinto LED unephutha, nomunye uyoqhubeka ukuba ashise.
Uma ukumelana uchungechunge ngokusebenzisa okufanayo amahlelo resistors, isamba ke ilingana umkhiqizo ukumelana ngenani ingqikithi izakhi.
Uma amanani Resistor zihlukile ke ukumelana Imininingwane ilingana isamba resistances element ngayinye.
Lapho kuxhunywe count parallel olwenziwa kancane ehlukile. Ngokwesibonelo, kukhona uchungechunge ezintathu amahlelo resistances-R1, R2, u-R3. Ukuze uthole ukumelana ingqikithi circuit ngokuqondene parallel, kubalulekile ukubala isamba reciprocals lamanani yalezi amahlelo, isb eligoqiwe amafraktjhini ezintathu 1 /-R1 +1 /-R2 + 1 / R3. Lezi zingxenyana zithathwe sehliselwe zifana - futhi ibalwa yi. Ingxenyana ewumphumela okuhlanekezelwe kanye kubhekwa ukubaluleka kokugcina.
Ukuze sithathe ukumelana nganoma yisiphi wesifunda, kubalulekile ukwenza iimbalo zibe ngendlela efanele. Abanye ochwepheshe balinge ukuphakamisa resistors ngokukwenza. Nokho, ngisho Kulokhu, okungenani cishe ukuthi iyiphi Resistor amagugu kungase kube elilungile.
Umuntu oqotho - ubani lo?
Profile "Eksprof": ukubuyekezwa, Ukucaciswa, umakhi. Inkampani Exprof, Tyumen